Andron’ny faha mpanjaka: « Fihaonana » ho an’ny mpiara-belona ny tsena | NewsMada
Andron’ny faha mpanjaka: « Fihaonana » ho an’ny mpiara-belona ny tsena
« Fihaonana », na toerana nifanomezam-boninahitra ny tsena teo amin’ny Ntaolo malagasy. Io « Fihaonana » io ny hevitry ny tsena efa talohan’ny fanjakan’Andrianampoinimerina, naorina teny amin’ny toerana avo.
« Fihaonana », mifono hevitra iray koa hoe « any ambony » ny tsena nifanaovana fotoana sy nifampiresahan’ny mpiara-monina. Tao anatin’izany « Fihaonana » izany mifono hevitra mitsena olona, nahatonga ny fototeny « tsena ». Ankoatra ny maha toeram-pivarotana azy, hifankahitan’ny mpiray tanàna hifampitam-baovao. Eo amin’ny lafiny varotra, ny mpivarotra no mampahafantatra izay amidiny ary izy ireo no manatona voalohany ny mpanjifa.
Teo an-tsena, nitondrana ny vokatry ny asan’ny tsirairay, natao hampidi-bola. Koa nametraka fepetra ny mpanjaka amin’ny fampiasana izany toerana izany, nampitoviany lenta amin’ny « Lapa » fanambarana ny fiandrianana. Anjaran’ny vadintany tamin’izany fotoana izany ny mpanelanelana teo amin’ny fanjakana sy ny vahoaka, miantoka ny fanaraha-maso, indrindra ny fampitana ny hafatra avy any amin’ny mpanjaka.
Zava-dehibe teo amin’ny fanjakan’Imerina ny fifanakalozana, tsy amin’ny lafiny varotra ihany fa teo amin’ny hevitra sy ny paikady fitantanana ny fanjakana, ny fiarovana fananam-bahoaka. Tamin’ny andron’Andrantsay, norarany mafy ny fivarotana omby mihoatra ny 19 ao anatin’ny indray andro ho fiarovana ny omby. Tsy misy misaina izany intsony ireo milaza azy mpitondra amin’izao andron’ny Repoblika izao. Na tamin’ny taonjato faha XVIII aza, mbola nahay niafina ireo nivarotra zavatra halatra, mifanohitra amin’izao taonjato diavintsika izao izay tsy takona afenina intsony, ohatra, ny tsenan’ny omby halatra.
Singa iray handrefesana ny toekarena
Ny tsena no singa iray handrefesana ny tanjaky ny tanàna iray momba ny toekarena. Ahitana sokajiny maro ny tsena, ambanivohitra na tanàn-dehibe. Misy ny tsena mpivarotra ambongadiny, toy ny eo Anosibe, sy ny mpivarotra an-tsinjarany any amin’ny fokontany. Misy ny tsena manokana malaza amin’ny faritra iray, toy ny tsenan’omby, vatosoa, volamena, lavanila …